1. Haddaba intee in le’eg ayay nalalka qoraxda ku shaqeeya? Guud ahaan marka laga hadlayo, baytariyada ku shaqeeya nalalka cadceedda ee bannaanka waxaa laga filan karaa inay socdaan illaa 3-4 sano ka hor intaanay u baahnayn in la beddelo Laydhka laftiisa ayaa socon kara toban sano ama ka badan. Waxaad ogaan doontaa inay tahay waqtigii wax laga beddeli lahaa markii ay nalalku kari waayaan ...
Muxuu sameeyaha xakamaynta tamarta qorraxda
Ka fikir koronto ilaaliyaha qorraxda inuu yahay jaangooye. Waxay ka bixisaa awoodda qalabka PV illaa nidaamka culeyska iyo bangiga batteriga. Marka bangiga batteriga uu ku dhow yahay inuu buuxiyo, kantaroolaha ayaa xakumi doona hadda amarka si loo ilaaliyo tamarta loo baahan yahay si buuxda batteriga loogu buuxiyo loona ilaaliyo dusha sare ...
Qalabka Solar-ka-Roobka ee shabakadda: maxaad u baahan tahay?
Nidaamka qorraxda ee ka baxsan shabakadda waxaad u baahan tahay baallayaasha qorraxda, koontaroolayaasha xakamaynta, baytariyada iyo qalabka wax lagu beddelo. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa qaybaha nidaamka qorraxda. Qaybaha looga baahan yahay nidaamka qorraxda ee ku xiran shabakadda Qorraxda nidaam kasta oo qorraxdu waxay u baahan tahay qaybo la mid ah oo lagu bilaabo. Nidaamka qorraxda ee ku xiran shabakadda qorraxda ...